Abakhiqizi be-hinge be-hinge abakhiqizi beKhabhinethi | Angeza
Ikhaya > Imikhiqizo > Ingibe > IKhabinethi Hinge
IKhabinethi Yekhabethe iyihadiwe ebalulekile yefenisha yokuxhuma umnyango weKhabhinethi nomzimba weKhabhinethi, ongakwazi kalula ukuvula umnyango wekhabethe ngokukhululeka.
I-Addith Hinges ukukhetha kwakho okuhlakaniphile. I-assortment yethu yama-hinges ifaka izinhlobo ezahlukahlukene ezahlukahlukene: Ngendlela eyodwa, ama-hinges ensimbi angenasici, ama-hinge afihliwe, ukuwahlinzeka ngezinto ezihlukile, ukukunikeza izinhlobo ezahlukahlukene zama-hinges kanye nama-hinges ahlukile izimfanelo zokuhlangabezana nezidingo zakho. Yonke imikhiqizo yethu iye yahlolwa ukuhlolwa okuqinile kwe-SGS, futhi i-hinge ngayinye iye yahlolwa ikhwalithi eqinile.
I-Addith Hinges iyizesekeli zethu zehadi yehadi. Ngasikhathi sinye, siyakwazi ukukunikeza ngentengo enhle kakhulu futhi silawule kahle ikhwalithi.
Izinto zethu ezivuthiwe ze-hinge zenziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme, insimbi engenacala, ngokwelashwa okubushelelezi futhi okubucayi, okungeyona lula ukukopela, futhi kumelana nosawoti kanye nenkungu. Ubuciko obuhle benza i-hinge ivulekile futhi ivale kunoma iyiphi i-angle kahle. Ngemuva kwamashumi ezinkulungwane zama-switch, abushelelezi futhi awabanjwa.